မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ဥက္ကဌကြီးအတွက် | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
– MIC က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရက်သမား၊ ဘီယာသမား၊ ဆေးလိပ်သမားဦးရေ တိုးပွားအောင် လုပ်နေတာလား?
– Permit တွေ အပေါ်ကများ မြိုးမြိုးမြက်မြက်လေးတွေ၊ ဆီဦးထောပတ်လေးတွေ စားနေရလို့လား?
– နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည် လူငယ်လူရွယ်တွေကို မူးယစ်ဆေးဝါးနဲ့ ယဉ်ပါးကြီးပြင်းလာသူတွေ ဖြစ်စေချင်တာလား?
– ကိုယ့်သားသမီးတွေကျတော့ နိုင်ငံခြားမှာ သွားထား၊ တိုင်းတစ်ပါး နိုင်ငံသား ခံယူခိုင်းထားပြီး သူများသားသမီး တွေကျတော့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုတဲ့ သဘောလား?
– ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်ကြီးအနေနဲ့ အရက်၊ ဘီယာနဲ့ ဆေးလိပ်တွေပဲ ရင်းနှီးဖို့ လုပ်တတ်ပါသလား?
This entry was posted in မြန်မာသတင်း, News and tagged ဦးစိုးသိန်း,ဲဦးစိုးသိန်း, မြန်မာသတင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်, MIC ဥက္ကဌ, MIC ဥက္ကဌဦးစိုးသိန်း, Myanmar Investment Commession on March 12, 2013 by koshwehtoo.
← တိုတိုထွာထွာသတင်းများ ဘဏ္ဍာအခွန် အဂတိလိုက်စားမှုများ →